ကလေးငယ်တွေရဲ့ Screen Time ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ အဆင့် (၆) ဆင့်
Home Parenting Child Care ကလေးငယ်တွေရဲ့ Screen Time ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ အဆင့် (၆) ဆင့်
ခေတ်ကာလအခြေအနေတွေအကြောင့် ကလေးတွေဟာ နည်းပညာပစ္စည်းတွေအပေါ် စွဲလမ်းတာဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ကြည့်နေရသလိုပါပဲ။ သင်ဟာ ဘယ်လိုပဲ အော်ဟစ်နေပါစေ ၊ ကလေးဟာ အဖက်လုပ်ပြီး လှည့်တောင်မကြည့်ဘူး။ အမှောင်ကမ္ဘာထဲရောက်ပြီး လက်တွေ့ဘဝနဲ့ ကင်းကွာပျောက်ဆုံးနေပါတော့တယ်။ ဒါတွေကို မိဘတွေအနေနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအဆင့် (၆)ဆင့် နဲ့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
အဆင့် – ၁ – လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ မိသားစုအစည်းအဝေးရှိပါစေ
ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့ မိသားစုနဲ့အတူ စကားပြောပြီး ဆွေးနွေးဖို့ပါ။ သင့်ရဲ့ အိမ်မှာ Screen Time ကို ဘာကြောင့်လျှော့ချချင်တာလဲ? သင့်ရဲ့ ကလေးတွေနဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချချင်တာကြောင့်လား? negative effects တွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့လား? YouTube ပေါ်မှာ အချိန်တော်တော်ကြာကုန်ဆုံးပြီး ဇွန်ဘီတစ်ကောင်လိုမျိုး ပုံသဏ္ဍာန်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သင့်ရဲ့ ကလေးတွေကို မြင်ရတိုင်း စိတ်မသက်မသာဖြစ်တာကြောင့်လား?
မိသားစုဝင်တိုင်းကို ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်စေပါ။ အသက် (၆) နှစ်အရွယ် ကလေးလေးတွေကအစ ပါဝင်ပါစေ။ ဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်းမှာ စစ်မှန်တဲ့ပန်းတိုင်တွေကို မဖြစ်မနေချမှတ်နိုင်ပါစေ။ တစ်ချို့ Screen Time တွေက အဆင်ပြေပေမယ့် တစ်ချိန်လုံး Screen Time ကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ချို့ Screen Time ဆိုတာ ကျောင်းပညာရေးအတွက် ပရိုပရမ်တွေ လုပ်ရတဲ့အခါ အထောက်အပံ့အဖြစ် လိုအပ်တာမျိုးပါ။ ဒီကနေ့မှာ ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ အသက်အရွယ်အလိုက် Screen Time ကို ဘယ်လိုစီမံသင့်လဲဆိုတာကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်များ – လမ်းလျှောက်တတ်စကလေးငယ်တွေအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကစားချိန်တွေကိုသာ ဂရုစိုက်သင့်ပြီး ၁၈ လနှင့် အထက် ကလေးငယ်တွေကတော့ ပညာရေးမီဒီယာတွေကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အသက် ၂ နှစ်မှ ၅ နှစ်အကြား – ဒီအရွယ်မှာတော့ တစ်နေ့ကို တစ်နာရီထက် လုံးဝမကျော်သင့်ပါဘူး။ ပညာရေးအစီအစဉ်တွေကနေ ကလေးငယ်တွေ သင်ယူနိုင်မယ့်အရာတွေကို မိဘတွေကပါ ကူညီသင့်ပါတယ်။
အသက် ၆ နှစ်မှ အထက် – မီဒီယာကို အသုံးပြုတဲ့အချိန်နှင့် မီဒီယာအမျိုးအစားတွေကို တသမတ်တည်းကန့်သတ်ထားပါ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ လုံလောက်စွာ အိပ်စက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ တစ်ခြားအပြုအမူတွေကိုလည်း မလွတ်ပါစေနဲ့။
အသက် ၁၀ နှစ် မှ ၁၈ အကြား – CDC ကတော့ တစ်နေ့လျှင် Screen Time ၁ – ၂ နာရီထက် မကျော်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
အဆင့် – ၂ – ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစတင်တဲ့နေ့အတွက် စီစဉ်ပါ
သင့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေကို စတင်ဖို့ နေ့စွဲကို ရေးဆွဲပြီး သေချာလုပ်ပါ။ သို့မှာသာ ၎င်းက ကလေးတွေရဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေကို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပုံစံအသစ်တွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်ရပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၃ – အစားထိုးလုပ်ရမယ့်အရာတွေကို စာရင်းပြုစုပါ
အကူးအပြောင်းကာလကို ပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ တစ်ခြားရွေးချယ်စရာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခု ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ?
အားကစားပစ္စည်းများ – ဘောလုံးနှင့် တစ်ခြားကစားစရာများ
အိမ်အပြင်မှာ ကစားလို့ရမယ့်ပစ္စည်းများ – မြေဖြူတွေ၊ ပူဖောင်းတွေ၊ အိုးပုတ်တွေ
အိမ်ထဲမှာ ကစားလို့ရမယ့် ပစ္စည်းတွေ – Play – Doh,ရောင်စုံစာအုပ်တွေ စတာတွေစုဆောင်းပါ။
အဆင့် – ၄ – ကလေးကစားနေချိန်မှာ ကူညီပါ
ကလေးတွေဟာ သိလိုစိတ်ပြင်းပြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ကစားတတ်ဖို့ သင်ကြားပေးခြင်းက မိဘတွေရဲ့ အလုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေနှင့် ကစားရတာဟာ ပျော်ဖို့ကောင်းကြောင်း သူတို့ကို ပြသပါ။
အဆင့် ၅ – မြင်ကွင်းကရော/ စိတ်ထဲကနေပါ ထုတ်ပစ်ပါ
ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ နည်းပညာပစ္စည်းတွေဆီ မသွားဘူးဆိုရင်တောင် မြင်နေရရင် စိတ်ကရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ လက်လှမ်းမီနေမယ်ဆိုရင် သင်နောက်ကွယ်မှာ ၎င်းရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်သုံးပါလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒါဟာ နှိပ်စက်နည်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၆ – ဒီလိုအမူအကျင့်တွေရဲ့ စံပြဖြစ်နေပါစေ
သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို အရင်ကလိုပဲ ပုံမှန်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ လူနေမှုပုံစံအသစ်အတွက် သူတို့မှာ စံပြရှိမနေပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သင့်ရဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်လို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Previous articleကျေးဇူးတင်တတ်သော ကလေးကို ပျိုးထောင်ခြင်း
Next articleဘေဘီလေးတွေရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းတွေကို ပိုကောင်းအောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
လူအများကြားမှာ ဝုန်းဒိုင်းကြဲခြင်းကို တုံ့ပြန်ဖို့ နည်းလမ်း (၉)ချက်
အသက် ၆လမှ ၁နှစ်အထိ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မိဘတွေ သတိမထားမိလိုက်ပဲ သားသမီးတွေကို ဖျက်ဆီးနေမိတဲ့ အချက် ၆ ခု